Isibonelo Sokwakhiwa Kwekhadi Lebhizinisi Lebhizinisi le-Grammarly - Print Peppermint
Isibonelo Sokwakhiwa Kwekhadi Lebhizinisi Lebhizinisi le-Grammarly
September 20, 2018 | Imibono yeKhadi Lebhizinisi & Ukuphefumulelwa
I-Grassy Serenity ye-Grammar & Spell Check
Isizinda sotshani saleli khadi lebhizinisi sithule kakhulu; ukubukeka okukodwa futhi umfundi uzizwa sengathi isisindo siphakanyisiwe emhlane wakhe. I-minimalistic futhi ilula futhi inokuheha okuzolile.
Ochwepheshe abaningi bakholelwa ukuthi ngaso sonke isikhathi kungcono ukugcina ikhadi lebhizinisi liqondile, lithembekile futhi lisha, esikhundleni sokulenza ngokweqile. Amakhadi webhizinisi ayinkimbinkimbi futhi anzima kakhulu awasebenzi kahle. Umklami wenze leli khadi lebhizinisi, egcina lolu lwazi engqondweni.
Kungcono ukutshala imali ngendlela efanele yokuphrinta kanye nesitoko esisezingeni eliphezulu sephepha ngoba banikela kakhulu esilinganisweni sokugcina. Izithombe namafonti nejometri kunendawo yazo kepha uma usebenzisa isitoko esisezingeni eliphansi, ngeke zisho lutho.
Izinto zokwakhiwa kwaleli khadi - ilogo emaphakathi emhlophe, imiphetho eyindilinga, kanye nesizinda esimhlophe - ziyakhazimula futhi zicacile ngoba umklami utshale imali kuphrinta esezingeni eliphakeme. Inikeza umuzwa wobuchwepheshe nokubukeka, futhi akubonakali kunombala ongekho umbala noma iphikseli.
Le mininingwane emincane esekhadini lebhizinisi izosiza kakhulu ekwenzeni umehluko ebhizinisini lakho. Qiniseka ukuthi uyabanakekela ukuqinisekisa ukuthi ikhadi lakho lebhizinisi liphuma njengomnqobi.
Repair amagiya amabhayisikili wokulungisa isitolo seKhadi Lebhizinisi Isibonelo
izixazululo zamandla ezinyawo eziluhlaza Isibonelo seKhadi Lebhizinisi →